भागरथी घटनामा डीआईजी सुवेदीले गरे दिनेश भट्टका बारेमा अर्को खुलासा – Online Nepalaja
February 20, 2021 90
काठमाडौं : बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर ७ की १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्ट गत माघ २१ गते साँझसम्म घर फर्किनन् । खोचलेकमा रहेको स्थानीय सनातन धर्म माविमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत भागरथी सधैँ अरु विद्यार्थी भन्दा केही ढिलो घर आउथिइन् ।
२१ गते साँझ ढल्केर पनि राती भइसक्यो तर, भागरथी आइनन् । भर्खरै श्रीमान बितेर दुःखमा रहेकी भागरथीकी आमाले वरपर छिमेकमा सूचना गरिन् भागरथी अहिलेसम्म पनि आइन । गाउँको परिवेशमा हुर्के बढेकी छोरी कसैको पोइल गइ की भन्ने पनि हुन्छ । सामान्यतया केही गाउँलेले त्यो सम्झिए ।
दोस्रो दिन भयो । गाउँलेले भागरथीलाई खोज्न थाले । प्रहरीलाई पनि खबर गरियो । विद्यालय जाने विद्यार्थीहरुलाई पनि यताउता बाटोमा हेर्न भनिएको थियो । सनातन धर्म माविमै अध्ययन गर्ने भागरथीका साथीले भागरथीको श,व देखेका थिए ।
प्रहरीलाई खबर भयो, प्रहरी पुग्यो कसले कसरी भागरथीलाई यो अवस्थामा पुर्यायो भन्ने गाउँलेको मनमा लाग्यो । गाउँले त्र सि त पनि भए । प्रहरीले भागरथीको श,वलाई पो’ष्टमा’र्टमका लागि जिल्ला अस्पताल पठायो ।
यता, प्रहरी पनि अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन सक्रिय बन्यो । प्रहरीले नजिकका मानिसबाट अनुसन्धान अगाडि बढायो । त्यसक्रममा दिनेश भट्ट पनि प्रहरीको नजरमा परे । दिनेशका बुवाले भागरथी हराएको दिन उनलाई सोधेका थिए । दिनेश ‘काँ गइछ के भएछ, भागरथीलाई ? उनले भनेका थिए, ‘मलाई था छैन, मइले केइ पनि गरेको छैन ।
दिनेशका बुवाले यो कुरा सोध्दै गर्दा प्रहरीका एकजना अधिकृत त्यहीँ स्थानमा थिए । उनलाई दिनेशको त्यो शब्दले क्लिक गरेको थियो । एकै प्रश्नको उत्तर हडबडाएर किन यस्तो अयो । प्रहरीले त्यसपछि उनको फलो गरेको हो । दिनेश भागरथीको न्यायका लागि गरेको आन्दोलनमा पनि सरिक हुन्थे, प्रहरी देखेपछि पछाडि हट्थे । प्रहरीले कुकुर ल्याएको थाहा पाएपछि उनी गोठालो पनि गएका थिए । यी सबै घटनाक्रमले प्रहरी निष्कर्षमा पुगेको हो ।
Prevनिकै सस्तो मुल्यमा बजारमा आयो गुणस्तरीय डर्ट बाइक ! हेर्नुहोस मुल्य सहित !
Nextयी नायिकाले सार्वजनिक गरिन आफ्नै नराम्रो भिडियो र फोटो, यसरि हेर्न सकिन्छ भनेर गरिन हेर्न अनुरोध (तस्विर सहित)